Toetr’andro : mahery vaika ny rivodoza Cebile | NewsMada
Toetr’andro : mahery vaika ny rivodoza Cebile
Nambaran’ny mpamantatra ny toetry ny andro, omaly, ny fisian’ny rivodoza mahery vaika ao amin’ny ranomasimbe Indianina. Cebile ny anarana entin’ity rivodoza ity ary any amin’ny 32.500 km atsinanan’i Toamasina ny foibeny, omaly.
Nanome toky anefa ny Meteo Malagasy fa tsy hisy fiantrakany amin’ny toetr’andro eto Madagasikara ny fisian’ity rivodoza ity. Tsy heverina akory aza ny mety handalovany eto amintsika raha ny vinavina hatrany. Tsy hisy, araka izany, ny filazana loza mahakasika an’i Cebile raha ho an’i Madagasikara.
Voafaritra ho anisan’ny rivodoza mahery faharoa ao anatin’ny vanim-potoan’ny rivodoza sahady ity Cebile ity. Tsiahivina fa hatramin’ny volana avrily vao ho tapitra ny fotoan’ny rivodoza, raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetr’andro hatrany.
Omaly, anisan’ny nanaitra ny olona any Toamasina ihany koa tamin’ny mitataovovonana ny fisian’ny “halo solaire” na ilay faritra boribory manodidina ny masoandro izay tsy mahazatra kanefa miseho indraindray rehefa fahavaratra izay taratry ny fisian’ny orana manodidina ny faritra isehoany.